» छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, एक घाइते
२०७८ आश्विन १,शुक्रबार १५:५३
धनुषा । धनुषा र नवलपरासीमा भएको छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका नरहाका ३० वर्षीय रुपेश यादव र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–४ रमवापुर बस्ने २७ वर्षीय विष्णु चौधरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित ढल्केबरमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको लु. ७२ प. ४७९२ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरित दिशाबाट जाँदै गरेको स. ४ प. ७९२६ नम्बरको मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा रुपेशको मृत्यु भएको हो ।
मृतक रुपेश स ४ प ७९२६ नम्बरको मोटरसाइकल चालक हुन् । उनको दुर्घटनामा परी घटानास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार, सोही दुर्घटनामा परी लु ७२ प ४७९२ नम्बरको मोटरसाइकल चालक धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–६ बस्ने ४६ वर्षिय मोहम्मद हासिम घाइते भएको छन् । उनको स्थानीयस्तरमै उपचार भइरहेको छ । मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ ।
यस्तै, बिहिबार राति नवलपरासी (पश्चिम) को सुनवल नगरपालिक–७ ज्यामिरेस्थित सडकमा लु ३७ प ६९५० नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा विष्णुको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइते उनको लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (पश्चिम) ले जनाएको छ । दुबै दुर्घटनाको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।